DAAWO-Shariif Xasan,”Madaxweyne Farmaajo dalka ayuu marin habaabinayaa welina madhicin ra’iisul wasaare la’aan”
September 15, 2020 Xuseen 16
Shariif Xasan Sheekh Aadan Madaxweynihii hore ee maamulka Koonfur Galbeed ayaa sheegay in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu qarda jeex geliyey xaaladda dalka, islamarkaana ay ka dhacayaan dhacdooyinka halis ah.
Madaxweynihii hore ee Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa xusay in dalku uu muddo ku dhow 60 maalmood uusan laheyn ra’iisul Wasaare xilli wali uu shaqeynaayo baarlamaanka iyo Madaxtooyadda.
Isagoo akhrinayey warsaxaafadeedka xisbiyada qaran ayuu sharci darro ku tilmaamay talaabooyinkii ay qaaday xukuumadda KMG ah oo uu sheegay in ay baalmartay Sharciga uuna socdo boob.
Shariif Xassanoow, Farmaajo waxuu la mid noqday oday reer kale dhex degay oo ay gabadhiisu u soo wada arddaadhigteen 10 wiil oo walaalo ah ee uu midkii ba ugu hanjabay in uu waran laabta ka likeyn doono haddii aan inanta isaga lagu meherinin.
Bal dab dheh adigu illayn idinka ayaa la idin af garan waayay ee.
Bal tab dheh adigu illayn idinka ayaa la idin af garan waayay ee.
Sharing sakiin,” Nucmaan, markii àan yaràa waxaan daawan jirey Cartoon cara tu ugu wick jireen ” Nucmaan” saciid Daniel ayuu u ekaa wallaahi odaygaa yar markii San arkay ” Nucmaan” ayàan zoo xasuustay, waana isku caqli,waayo Nucmaan non yar OK aad u buuran OK caqli yar ayuu ahaa,soda Daniel al zinjibari O kale.nacalla kugu yaal.
SHARIIF SAKIIN, waa tuug weyn…hadalkiisa wax ka soo qaad malaha..aniga farmaajo ma taagersini laakiin KOOXDA TUUGADA AH
XASAN SHIIKH NGO MR DOLLAR.
FARMAAJO siyaasada ayaa ka qaldantey…meesha laga soo raacay waa markii uu Jubbaland dagaalka ku qaaday taasi waxeey keentey koox yar tuugo ah reer Puntland iley la safteen Jubbaland
Boodhariyow,adigu sidaa siilkii maalinba meal raac, lugta bidix iyo lugta midig,kintir baa tahay,ragannimo yeelo OK isku kalsoonoow.
Waa marka hore magaca aad isku soo rartay iyo waxaas kaa soo burqaday isma qabtaan ee kala daa. Magaca sidaas ha u bahdilin saaxiib.magaca sidiisa saxsan waa sida aan anigu u qoray ee ka baro oo higgaadda dib u saxo.
Hadalka na murtidiisa dhuux inta aad meel cidla ah ka boodayso; Farmaajo miyaan u garaabay mise ka garaabay? Bal dib u dheeho oo dhaad.
Ugu dambeyn na, adiga iyo neefka kale ee sidaada u maangaaban oo dad aydaan ficlan aqoon ba isu lahayn iskudayaysaan in aydin hawada uga abtirisaan, camal yeesha oo danihiina ka raacda amuuraha aan idin khuseynin.
Madashan qof walba waa u xor iyo afkaartiisa ka dhiibto. Ragannimo ku dooda, aan ahayn dinaaha naga daaya oo akhyaarta u banneeya.
Waryàa,suldaanka maakhir/ maantana dhabayac noqday,maxaad intaas O sanadood beenta noogu sheegaysay? Maxaad qabiilkaaga IGA cararaysay? yaad ka cabsanaysay? Fulay fulay dhalay baa tahay,waligàa haka baqan qabiilkaaga,Ku faan qabiilkaaga,xitaa haddii aad dhimanaysid,qabiil kale OK facaaga ah waligaa ha Sheehan, soda saaxiibkaa, A.Xade OK Mareexaan Sheegan jiray,maalin bore ayaan zoo qabtay,tacbaan tacbaan dhalay wedge kaasi, adigaaba lagu qaatay OK Harti ka fogaan isagu did uu aqoon u lahayn ayuu Sheehan jiray,siyaasaddii meeshaa ayey idin LA tagtay,kkkkkkk, deer Dolow ayuu Sheehan jiray, wallaahi in uu waligii Arab keel at Dolow Ku taallo,kkkkkkk,meal sun ayey siyaasaddu idinla maraysaa we nasta,ka fadhiista bahasha.wiilka wepsite ka lehna faraha ka qaada,lacag ayuu suubinaya,haddii uu maalin walba pintland amaano did u imaanaysaa maa jirto,maskaxda ka shaqaysiiya,waxaani waa ganacsi cusub.
Sharif dakiin indho adkaa sow mahan
Ninkii gabre borsada uwaday
Xageelayahay oo uudagaa qalalasihii
Dalka kadhay buukafaiiday
Waxaa ufiican inuudhunto runtii
Campaala shirkii aad kugashay
Wali somalidu waogtahay xaq waa uu
Ilayahay inlaxiro waa jaajuus aad
Uliito 80jir ah xumaa baalo hogankuu
Dhiibatay markan arko waan xanaaqaa
Somaliyey ninkaas shaydanka ah
Shariif Sakiin tuuga ah bal ka warama hadduu leeyahay sheerkabugu badan bankiga Salaama Bank iyo wuxuu si gaar ah u leeyahay xawilaadda Bakaal..
Bal ninka waalan banki Shariif sakiin tuug uu leeyahay lacag dhiganaya waa kuma.
Jubalander sidii dumarkaad u hadleysay.
NIN RAGA kama hadlo Buurnaan waayo HOOYADAA iyo walaashaa miyaad ku daro lahayd.
Deni iyo axmed madoobe waxa ay doona yaan ayaa ka soconaya somaliya maxaad ka bedeli kartaa?
carada iyo cuqdada waad la dhiman
DANI MAXUU laangaab ciilay.
War yaaaa ilaahay yaqaan , kana wali umada wali ma hortaagan yahay, siyaasi ayaan ahay waan idin xukummayaa muyuu leehay ? Zoomalia ka quusta.. Yaaaab
Shariiif ma aha waa tuuuug kabo la…waxay ahayd in la xidho xabsiga Mandheera lagu rido 100 sananadood lagu xukumo.
Ma Adigoo Majeerteen Ah Baa Cid Laangaab Ku Caynaya 😀😀😀 Walaahay Waa Aduunyo Gadoon,
Majeertaan Markii Filimkii Harti La Odhan Jiray Uu Shaqayn Waayay Ayey Ogadeen Dabo Istaagayn Sida Geedka Garanwaaga La Yidhaahdo (Cali Garoobka) Ee Dhirta Kale Ka Dhex Baxa 😀 Ileen Kaligiin Meel Ma Istaagi Kartaane,,,
Ninka Laandheeraha Ah Dadka Iskuma Dhadhajiyo Kaligii Ayuu Meel Maraa.
Fardojaan wiil cumar maxamuud ah oo reer Galkacyood ah ayaa waxaa la kaftamay wiil madhibaan ah oo ku yiri (LAAN GAAB AYA TAHAY),
Intuu sidaa u fiiriyay oo uu garan waayay wax uu ugu jawabo ayuu ku yiri ( taa ilaah ayaa wax kaa oran).
Marka adiga fardojaan wacan ku Leeyahay ( ILAAH AYAA WAX KAA ORAN).
Nuur hadalkaada wax macno ah ma sameynay waayo dagaalki jubbaland Waa ka horeeyay farmaajo.
Xasan shiikh ayaa diiday inuu aqoonsado jubbaland faroole iyo gaas ayaa ku khasbay inuu aqoonsado.
You look confuse, qoraalkaadana Waa confuse.